काठमाडौं उपत्यका निषेधाज्ञा : ‘मर्निङ वाक’ निस्के पनि कडा भन्दा कडा कारबाही – News Np Online
शनिदोष हटाउन संकटा देवीलाई भेटी स्वरुप ॐ लेखी एक शेयर गर्दै, आजको राशिफल पढ्नुहोस। मनोकामना पुराहुनेछ।
मे’लम्ची’काे पा’नी’ले ४ दि’न’मा ३ कि’लाे’मि’टर दु’री पा’र ग’र्यो
२ दि’न भि’त्रमा सो’चे’को का’म ब’न्ने’छ, पू’रा पढेर ॐ ले’खि से’यर ग’रौं
कु ट पि ट गरेको भन्दै पल शाह वि’रु’द्ध प्रहरीमा उजुरी (भिडियो)
दु’र्घट’नाग्र’स्त ट्यां’कर’बाट ते’ल भ’र्दै ग’रेको भि’डि’यो भा*इर’ल
उ’र्लाबा’री का’ण्ड’मा ठु’लो च’लखे’ल आ’रो’पी ३ ला’ख ध’रौटी’मा छुटेपछि स्थिति झन् तनाब ग्रस्त
बौ’द्ध न’याँ व’स्ती’मा घट’ना रह’स्य’मय | सं’गै ब’स्ने सा’थीले के’टासँ’गको स’म्बन्ध’बारे य’स्तो भ’ने
ने’पाल’कै अ’नौ’ठो श’क्ति’सा’ली दे’वी’को म”न्दि’र ज’हाँ ऐ’नै ऐ’ना’ले भ’री भरी’भरा’उ छ ॐ ले’खी भे’टी स्व’रुप स’बैले से’यर ग’रौ हे’र्नु’होस भि’डियो !
OMG प’त्या’उ’नु हु’न्छ? सो*च्नै न’स’क्ने’गरी आ’ज ह्वा*त्तै घ’ट्यो सु’न’को मु*ल्य
अर्जेन्टिनी फुटबलर म्याराडोनाको निधन : मस्तिष्कको शल्यकृया सफल भएर पनि अस्ताए
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौं उपत्यका निषेधाज्ञा : ‘मर्निङ वाक’ निस्के पनि कडा भन्दा कडा कारबाही
काठमाडौं उपत्यका निषेधाज्ञा : ‘मर्निङ वाक’ निस्के पनि कडा भन्दा कडा कारबाही
काठमाडौं- उपत्यकामा निषेधाज्ञाका वेला ‘मर्निङ वाक’ गर्न पनि नपाइने भएको छ । प्रहरीले अत्यावश्यकबाहेकका गतिविधिमा कडाइ गर्ने भएको छ ।
काठमाण्डाै उपत्यकामा तपाईँ बिहीबारदेखि मर्निङ वाक या अरु कुनै अत्यावश्यक नभएको काममा निस्कँदै हुनुहुन्छ ?
एकै छिन त हो, त्यहीँ पर पुगेर आइहाल्छु नि भन्ने सोचमा निस्कने सोच बनाउनुभएको छ ? यदि त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँ कारबाहीमा पर्न सक्नुहुन्छ ।
बुधबार रातिदेखि लागू हुने निषेधाज्ञाको आदेशअनुसार यसपाली भने प्रहरीले अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधिमा निकै कडाइ गर्ने छ । काठमाण्डाैका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने , ‘मर्निङ वा इभिनिङ वाक जान्छु भन्ने सोचेर ननिस्किनुहोस्, सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारबाही हुन्छ ।’
त्याे ऐनमा आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिमाथि एक महिनासम्म कैद वा एक सय रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै यो ऐन अन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिलाई काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिँदै गएकाले यसअघि लकडाउनमा अपनाइएको सहजीकरणसमेत यसपाली हुने छैन ।
कुनै सवारी पाससमेत जारी गरिने छैन । त्यसैले लकडाउनभन्दा बुधबार राति १२ः०० बजेदेखि लागू हुने निषेधाज्ञाको आदेश थप कडा हुनेछ ।
यसअघि उपत्यकामा कुनै दिन पनि बढी जोखिम भएको थिएन । यस पटक दैनिक एक सयभन्दा बढी सङ्क्रमित देखिन थालेको र अस्पतालमा शय्याकाे समेत अभाव हुन थालेपछि उपत्यकामा महामारीको अवस्था रहेकाले कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कुबेर कडायतले प्रशासनको निर्णयअनुसार महानगरीय प्रहरी कार्यालयमार्फत आवश्यक ड्युटी खटाउनेदेखि तयारीका सबै व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिए । आदेश पालनामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनले बताए ।
उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रजिअको मङ्गलबारको बैठकले बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी अत्यावश्यक बाहेकका सबै गतिविधिमा निषेधको आदेश जारी गरेको छ ।
राति १२ः०० बजेदेखि अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधि गर्न पाइने छैन । त्याे आदेश यही भदौ १० गतेसम्म लागू हुनेछ ।
सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (३) बमोजिम काठमाण्डाै उपत्यकामा लागू हुने गरी याे निर्णय गरिएको हो । अनावश्यक रुपमा मानिस घरबाट निस्किए कारबाही हुनेछ । सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनसमेत निस्कन पाउने छैनन् । यसपाली खाद्यान्न, औषधिजन्य बाहेकका ढुवानीसमेत रोकेको प्रजिअ दाहालले बताए ।
अत्यावश्यक सामग्रीलगायतका मालवाहक ढुवानीका सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी मात्रै सञ्चालन हुने छन् । काठमाण्डाै उपत्यकाभित्र सवारी प्रवेशमा पनि निषेध गरिएको छ । जिल्लाभित्रका सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनसमेत सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
डन चक्रेलाई सडकबाटै घिसारे एसएसपी सिंहले
”भ’र्खरै सिं’हद’रबार’मा ठु’लो ल*डा’इँ 1 ज’ना ठाँ’उको ठाँ’उ भ’यो,प्र’चण्ड’को हो’स उडेओ, ने’ता जे’ल जा’ने प’क्का”
टि’प्पर’ले मो’टरसा’इकल’लाई ठ’क्क’र दिँ’दा आ’शि’ष श्रे’ष्ठ’को मृ’त्यु
कुलमानलाई कर्मचारीले गरे बिदाई
अभिनेत्री र पत्रकारबीच पेशागत मर्यादामा रहने समझदारी
29 mins अघि